अर्थ व्यापार Archives - itaharinews
सुनसरी /स्टवेरी अर्थात भुइ ऐसेलुको नामले चिनिने यो फल विदेशमा मात्र हुन्छ भन्ने थियो तर यो फलको यतिखेर नेपालका बिभिन्न स्थानमा ब्यबसायिक रुपमै खेती सुरु गरिएको छ । ऋहिले यो व्यबसाय ५ जना स्थानिय युवाहरुको समुहले सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको वडा न १ सुर्यकुण्डमा समेत व्यबसायिक रुपमानै खेती सुरु गरेका छन् । लामो समय बैदेशिक रोजगारीको वसाइ पछि स्वदेशमै केहि गर्ने उदेश्यले २ बिघामा क्षेत्रफलमा य...
इटहरी । माउण्ट एभरेष्ट वाइनरीको उत्पादन ‘प्रिन्सेस’वाइन बजारमा आउँने भएको छ । धनकुटाको किबी फलबाट उत्पादन भएको वाईन लकडाउनकै बीच बजारमा लौजाने तयारी गरेको हो । पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको किबी फल सँगै अन्य फलफूलबाट उत्पादन गरेको प्रिन्सेस वाइनको बजारीकरणको तयारी गरेका छौं,’ कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु बास्तोलाले भने । केहि दिनमै नेपालको प्रमुख सहरहरु सँगै नेपाली बजारमा वाइ...
काठमाडौँ – नेपाल विधुत् प्राधिकरणले प्रति महिना एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकलाई २० प्रतिशत मिनाहा गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसले व्यापार,व्यवसायलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेका बेला प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकका लागि यस्तो सहुलियत दिएको हो। नेपालमा करिब ३८ लाख घरेलु ग्राहक छन्। शुक्रबारको नेपाल विधुत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद्समक्ष महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरे...
काठमाडौं– अर्को सातादेखि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिँदैछ र यसपछि उनले निरन्तरता पाउँदैनन् भन्ने हल्ला आम लगानीकर्तामाझ फिँजाइएको छ । खतिवडा हट्नेवित्तिकै सेयर बजारमा चामत्कारिक सुधार आउँछ भन्ने हल्ला चलाइए पनि वास्तविक रुपमा यो बढ्नुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा। ...
काठमाडौँ /सामसुङ मोबाइलका लागि आधिकारिक बिक्रेता आईएमएसले आफ्ना अधिकांश आईएमएस स्मार्ट शोरुमहरुमा सामसुङ एक्सचेन्ज सुविधा ल्याएको छ । यस सुविधाअन्तर्गत सामसुङका प्रयोगकर्ताहरुले नयाँ सामसुङ स्मार्टफोनका लागी आफ्नो पुरानो सामसुङ स्मार्टफोनहरु एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । साथै ग्राहकहरुले अब आफ्ना पुराना सामसुङ स्मार्टफोनहरुमा राम्रो मूल्यांकन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा लिन इच्छुक ग्राहकहर...
विर्तामोड । झापाको मेचीनगरमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको पाँचतारे होटल मेची क्राउन आगामी वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । विदेशी व्यवस्थापकले मात्र नेपालका पाँचतारे होटलको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा पहिलो पटक नेपाली युवाको समूहले पाँच तारे होटल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको हो । होटलमा पवित्रकुमार कार्की, बलराम सापकोटा, सुरेशमान श्रेष्ठलगायतको लगानी छ । होटलको व्यवस्थापन नेपाली कम...
इटहरी । होटल व्यवसायी संघ इटहरीले दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीको रुपमा स्थापना भएका होटल व्यवसायीहरुले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य सहित इटहरीमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र तालतलैयामा आफ्नो वार्षिक साधारण सभाको आयोजना गराका हुन् । इटहरीमा सञ्चालन भईरहेका होटल व्यवसायीहरुको हकहितको लागी काम गर्दैै आएको संघले बिभिन्न समयमा सामाजिक काम गर्दे आएको र होटल व्यवसाय भनेक...
घर तथा गाडी कर्जाका लागि मेगा बैंकले ल्यायो आकर्षक योजना !
काठमाडौँ, २३ माघ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आवास तथा सवारी साधनका लागि नयाँ आकर्षक कर्जा योजना ल्याएको छ । ‘आफ्नो घर, आफ्नै गाडी, मेगा बैंकका साथमा बढाउनुस् पाइला अगाडि’ भन्ने नाराका साथ मेगा बैंकले ‘मेगा आवास तथा सवारी साधन कर्जा योजना’ ल्याएको हो । ग्राहकहरुलाई अत्याधिक सुविधायुक्त विशेषताहरु रहेको यस नयाँ कर्जा योजनामा पहिलो घर खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई मुल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्मको फाइनान्...
मझेरीले मनायो आफ्नो दोश्रो वार्षिकउत्सव !
इटहरी, विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका युवा व्यवसायिहरुले सामुहिक रुपमा चलाएको इटहरी २ आपँगाछीमा रहेको मझेरी रेस्टुरेन्टले आज आफ्नो दोश्रो बार्षिकउत्सव मनाएको छ । वि.स. २०७४ माघ २२ गते रबिन बस्नेत, गोबिन्द आचार्य, आभाष सिवाकोटी,र प्रकाश बस्नेतको सयूक्त लगानीका खोलिएको रेस्टुरेन्टले छोटो अबधिमा ग्राहकको मन जित्न सकेको सञ्चालक मध्येका एक आभाष सिवाकोटीले बताए । इटहरी क्षेत्रमा पारिवारिक, शान्त ...
काठमाडौं । अहिलेसम्म ४ वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तीमध्ये दुई वाणिज्य बैंकले नाफा बढाएका छन् भने दुईको नाफा घटेका छ । अहिलेसम्म एनआइसी एशिया, सानिमा, सिद्धार्थ र सिटिजन्स बैंकले मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । एनआइसी एशिया र सानिमा बैंकको नाफा वृद्धि भएको छ । एनआइसी एशिया बैंकले पुस महिनासम्म २ अर्ब १ करोड ६२ लाख खुद नाफा गर...